လေဟာနယ်အာရုံစူးစိုက်မှု, Electroplated လှော်ခြောက်စက်, Blade ကိုခြောက်စက် - Yanjialong
အကျိုးသက်ရောက်မှုရေဆိုးရေငွေ့ပျံအသုံးပြုမှုကိုလူပျို: ဒီပစ္စည်းကိရိယာများဆေးဝါး, ဇီဝဗေဒ, အစားအစာ, ဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်တယ်, မကြာခဏရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ, အသီးဖျော်ရည်, ဒဏ်ငွေဓာတုဖြေရှင်းနည်းများ, etc ၏ရေငွေ့ပျံအသုံးပြုသည် Features: တစ်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသေးငယ်တဲ့ကြမ်းပြင်ဧရိယာ။ Precision GMP လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, အတွင်း, အပြင်ကပစ္စည်းကိရိယာများ polishing ။ ခ။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့်တစ်အပူပေးစက်, သီးခြားတစ်ဦး defoamer တစ် condenser နှင့်တူသောဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ က c ....
နိဒါန်းလေမှုတ်စက် YZG / FZG စီးရီးလေဟာနယ်: အဆိုပါဒါခေါ်လေဟာနယ်ခြောက်သွေ့လေဟာနယ်အခြေအနေများအောက်တွင်ပစ္စည်းခန်းခြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်လေဟာနယ်စုပ်စက်ချပေးနှင့် dehumidifying အသုံးပြုသည်လျှင်, ခြောက်သွေ့မှုနှုန်းအရှိန်သည်။ မှတ်ချက်: တစ် condenser ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကပစ္စည်းအတွက်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဟာ condenser ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်; အဆိုပါ SK ကိုစီးရီးရေလက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်လျှင်, condenser စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုချွေတာ, ချန်လှပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: YZG / FZG စီးရီးလေဟာနယ်လေမှုတ်စက်ငြိမ်လေဟာနယ်လေမှုတ်စက်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါဒေါက်တာ ...
လေဟာနယ် decompress အာရုံစူးစိုက်မှု
လေဟာနယ် decompress အာရုံစူးစိုက်မှုပထမဦးစွာလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်ဒီပစ္စည်းကိရိယာများဆေးဝါး, အစားအသောက်, ဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အသင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အရက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ရိုးရိုး reflux ထုတ်ယူခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိအစိတျအပိုငျးကောင်းသောချေးခုခံရှိပြီး GMP စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်သံမဏိ၏လုပ်နေကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာအဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့်တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုအကြံပေးအဖွဲ့အဓိကကိုယ်ထည်တစ်ခုအခိုးအငွေ့-အရည်၏ရေးစပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းမှု ...
နှစ်ချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုပထမဦးစွာလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်အဆိုပါအာရုံစူးစိုက်မှုစသည်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောရိုးရာတရုတ်ဆေးဝါးအဖြစ်အရည်၏အာရုံစူးစိုက်မှု, အနောက်တိုင်းဆေးပညာ, ဂလူးကို့စ, ကစီဓါတ်, monosodium အချိုမှု, နို့ထွက်ပစ္စည်းများ, ဓာတုပစ္စည်း, သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အနိမ့်အပူချိန်လေဟာနယ်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည် အပူအထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သတိထားတွက်ချက်မှုများနှင့်သတိထားဒီဇိုင်းပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမူလ features တွေထက်ပိုပြီးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒုတိယ, ပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းမှုအဆိုပါကို double-effect ကို ...
သုံး effect ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု
သုံး effect ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုပထမဦးစွာလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်အဆိုပါအာရုံစူးစိုက်မှုစသည်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောရိုးရာတရုတ်ဆေးဝါးအဖြစ်အရည်၏အာရုံစူးစိုက်မှု, အနောက်တိုင်းဆေးပညာ, ဂလူးကို့စ, ကစီဓါတ်, monosodium အချိုမှု, နို့ထွက်ပစ္စည်းများ, ဓာတုပစ္စည်း, သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အနိမ့်အပူချိန်လေဟာနယ်များအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည် အပူအထိခိုက်မခံပစ္စည်းများအာရုံစူးစိုက်မှု။ သတိထားတွက်ချက်မှုများနှင့်သတိထားဒီဇိုင်းပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမူလ features တွေထက်ပိုပြီးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာအဆိုပါသုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုက c ကိရိယာဖွဲ့စည်းမှု ...
အလင်းဆုံအာရုံစူးစိုက်မှုပထမဦးစွာလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်ဒီပစ္စည်းကိရိယာများဆေးဝါး, အစားအသောက်, ဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အသင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အရက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ရိုးရိုး reflux ထုတ်ယူခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိအစိတျအပိုငျးကောင်းသောချေးခုခံရှိပြီး GMP စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်သံမဏိ၏လုပ်နေကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာအဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့်တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုအကြံပေးအဖွဲ့အဓိကကိုယ်ထည်တစ်ခုအခိုးအငွေ့-အရည် separator ၏ရေးစပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းမှု ...
ကွိုင်လေဟာနယ်အာရုံစူးစိုက်မှုပထမဦးစွာအဆိုပါ device တွေဖြစ်တဲ့ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာအနောက်ပိုင်းဆေးဝါး, အစားအသောက်, monosodium အချိုမှု, နို့ထွက်ပစ္စည်း, ဂလူးကို့စ, ကစီဓါတ်, ဖျော်ရည်, ဓာတုနှင့်တူသောအဖြစ်အရည်ပစ္စည်းအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့သင့်လျော်သည်လျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်။ ဒုတိယအချက်မှာအဆိုပါ device ကိုရိုးရှင်းပြီးထိရောက်ဟိုက်ဒရောလစ် ejector နှင့်အတူဖုန်စုပ်သောအပူလျှပ်ကာဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ Cylinder ပုံစံတံဆိပ်ခတ်ကိရိယာတန်ဆာဖွဲ့စည်းမှု။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများသုံးပိုင်း, ထိုရေငွေ့ပျံ chambe သို့ကွဲပြား ...
အရက်ပြန်လည်နာလန်ထူအာရုံစူးစိုက်မှုပထမဦးစွာလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်ဒီပစ္စည်းကိရိယာများဆေးဝါး, ဇီဝဗေဒ, အစားအစာ, ဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဒါဟာမကြာခဏဒါဟာရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်စသည်တို့ကိုရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ, ဒဏ်ငွေဓာတုဖြေရှင်းချက်၏ရေငွေ့ပျံများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒုတိယအချက်မှာအဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့်တစ်အပူပေးစက်တစ်ခုရေငွေ့ပျံတစ် defoamer တစ်ဦးကို double condenser တစ်ဦးအေးတစ်အရည်လက်ခံ ta ၏ရေးစပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းမှု ...
သုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအငွေ့ပျံသည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဆေးပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အစားအစာများနှင့်ပေါ့ပါးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကဲ့သို့အရည်ပစ္စည်းများ၏အငွေ့ပြန်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပူချိန်တိုသည်။ အငွေ့ပျံနှုန်းသည်မြန်ဆန်သည်။
အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါနှင့်တည်ငြိမ်သောစျေးကွက်သည် ၂၀၁၁-၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်
အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါများနှင့်စုစည်းထားသောစျေးကွက်၏အလားအလာများ၊ ပြည့်စုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အဓိကစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ခန့်မှန်းမှုများ၊ 2019-2025 ။ အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါများနှင့်ဓာတ်တိုးရောင်းချမှုစျေးကွက်အစီရင်ခံစာများသည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဗျူဟာများအတွက်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စျေးကွက်တိုးတက်မှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပါသည် ...
ကျဆင်းသွားသောရုပ်ရှင်အငွေ့ပျံသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအငွေ့ပျံနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စုပေါင်း၍ ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်အငွေ့ပျံဟုခေါ်သည့်မြင့်မားသောရုပ်ရှင်အငွေ့ပျံခြင်းနှင့်ခြစ်ထားသောအငွေ့ပျံသည့်အငွေ့ပျံခြင်းဖြစ်သည်။ ပါးလွှာသောအငွေ့ပျံစေသောပစ္စည်းများသည်သိသာထင်ရှားသောကောင်းကျိုးများရှိပြီးဓာတု၊ အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သတ္တုတွင်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။
အတင်းအကျပ်လည်ပတ်စေသည့်အငွေ့ပျံစေသောကိရိယာသည်ဖြန့်ဝေရန်ပြင်ပစွမ်းအားအပေါ်မှီခိုသောအငွေ့ပျံသူဖြစ်သည်။ အတင်းအကျပ်လည်ပတ်စေသည့်ရေငွေ့ပျံစက်သည်ပုံဆောင်ခဲအငွေ့ပျံခြင်း၊ ပုပ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်။ ...
MVR ရေငွေ့ပျံစက်သည်အဓိကအားဖြင့်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးစွမ်းအင်ချွေတာသောအငွေ့ပျံစေသောပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်ဖိအားနိမ့်သော steaming နည်းပညာနှင့်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ရေသည်စွမ်းအင်အဖြစ်ရေကိုအလယ်အလတ်တွင်ခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာက ...
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2022: All Rights Reserved ။ Featured ကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
လူပျို Effect ဖုန်စုပ်အာရုံစူးစိုက်မှု, လူပျိုအလွှာ mesh ခါးပတ်ခြောက်စက်, နှစ်ချက် Effect အာရုံစူးစိုက်မှု, လူပျို Effect အာရုံစူးစိုက်မှု,
Nihe Zhenglu မြို့, ChangzhouCity, JiangsuProvince